Tag: janrain pinda | Martech Zone
Tag: janrain pinda
Saka iwe une yako yemagariro midhiya kuvepo uye kumhanya. Iwe uri kuwedzera mafeni uye vateveri nezuva uye kuwana runyerekupe rwevashanyi kune yako saiti. Zvemagariro midhiya zviri kukupa iwe kukura, asi iwe hausi kuona kudzoka pane investment iyo yese yemagariro midhiya gurus iri kutaura nezvayo. Zvemagariro enhau zvinoita kunge iyi neti hombe, asi hausi kubata chero chinhu nekuti munhu wese ari kutsvedza nemumaburi. Pane zviitiko zviviri zvakakosha